Kandidan’i IRK ao Ivato Tonga any an-tsekoly mihitsy manao propagandy
Tonga hatrany an-tsekoly ny kandida Rasoamiaramanana Godfrin IRK ao Ivato no manao propagandy.
Fitaovam-pifidianana Tsy mbola tonga eny amin`ny fokontany
6 andro tsy hirosoana amin`ny latsa-bato amin`ny fifidianana ben`ny tanàna sy mpanolotsaina eto Madagasikara dia tsy mbola tonga eny
Rina Randriamasinoro “Tsy hanaiky habadoina intsony isika…”
Andro vitsy sisa dia hifarana tanteraka ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ben’ny tanàna.
Manaitra ny Vondron’olon-tsotra « Tena rava ny faripiainan’ ny Malagasy. »
Nampiaka-peo manoloana ny zava-misy eto Madagasikara tetsy amin’ny Bon Accueil Ambatonakanga omaly ny avy eo anivon’ny Vondron’olon-tsotra na VOT tarihin’ny filohany, Sarah Zoé.
Fiadidiana ny Repoblika Miha halan’ny olona ny talen’ny serasera
Toa tena miha halan'ny olona ny Talen'ny seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika Rtoa Rinah Rakotomanga. Masiaka firesaka any anaty facebook. Indraindray mifamaly aman'olona mihitsy. Efa toetra ve sa izay mihitsy ilay endrika serasera atao ?
Antoko Teza « Hain’ny frantsay ny mody mamerina ny Iles Eparses »
Tsy mieritreritra ny fitondrana ankehitriny ho maherifon’ny firenena ny antoko Teza, hoy ny filohany, Jean Louis Rakotoamboa,
Fampielezan-kevitra Tsy dia mampiraika ny Malagasy intsony
Tsy dia nalaza ny fampielezan-kevitra. Mitabataba ny mpanao propagandy mandalo kanefa mipitrapitra fotsiny ny olona.
Nihofahofa ny sainam-pirenena Malagasy teny an-tanan’ny olona nandritra ny fahatongavan’izy mivady nanotrona ity lanonana ara-panjakana ity. Tehaka sy fankasitrahana no nandraisan’ny olona azy noho ny fahatsoram-pony sy ny fahamendrehana ara-politika ananany. Nasehony ho hitan’ny vahoaka Malagasy hatrany fa olon’ny fihavanana sy fitiavan-tanindrazana ny tenany. Maro no vaky vava fa tena hafa i Dada. Sambany teo amin’ny tantaran’ny firenena ny tahaka izao. Nanome voninahitra ny lanonana teny Mahamasina avokoa moa ireo filoha teo aloha miisa 3 dia i Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary i Hery Rajaonarinampianina. Nitohy tamin’ny fanatrehana sy fandraisana anjara tamin’ny fotoam-bavaka lehibe teny Mahamasina nentin’ny fiangonana FJKM nitrotro am-bavaka ny taona 2019 izany ho an’i Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina, izay samy zanaky ny fiangonana. Tsy hita teny an-toerana kosa ny filoha vaovao Andry Nirina Rajoelina. Nandritra io fotoana io, dia mbola nifanotofan’ny vahoaka sy ny mpino marobe i Marc Ravalomanana ka niara-niventesan’ny olona ny hoe: “izahay tsy miala aminao Dada a !”. Tena hafa raha samy mpanao politika i Marc Ravalomanana, ary tena raiamandrenin’ny firenena. Vao mainka hitiavan’ny olona azy ny fahendrena asehony, hany ka na ireo olona nanohana ny mpifanandrina politika taminy tamin’ny fifidianana aza vaky vava hoe: tena hafa iny lehilahy iny. Miandry ny toromarika ara-politika avy aminy ny mpiara-dia amin’i Marc Ravalomanana satria tsy mijanona eo ny tantara, fa mbola maro ny dingana holalovan’ny firenena, raha ny resa-pifidianana fotsiny ohatra. Andrasan’ny rehetra ihany koa ny mety ho endriky ny governemanta vaovao hitsangana eo na hisy olon’ny Tiako i Madagasikara na tsia.